Pep Guardiola oo soo muuqday asaga oo xiran saacad qiimaheedu gaarayo 1.5 milyan euro… – Hagaag.com
Pep Guardiola oo soo muuqday asaga oo xiran saacad qiimaheedu gaarayo 1.5 milyan euro…
Posted on 24 Oktoobar 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
Tababaraha reer Spain Pep Guardiola ayaa soo muuqday isagoo xiran saacad aad u heer sareyso oo qaali ah intii lagu guda jiray shirkii jaraa’id ee ka horreeyay kulankii Manchester City iyo Atlanta ee is reeb reebka Champions League.
Manchester City ayaa 5-1 ku xasuuqday kooxda reer Italy wareegii saddexaad ee Group C ee Champions League.
Ciyaarta ka hor, weriyayaasha ayaa ishooda qabatay Guardiola oo xiran saacada qaaliga ah ee Richard Mille, oo si gaar ah loo horumariyey oo loogu magac daray ciyaaryahanka Tennis-ka reer Spain ee Rafael Nadal.
Sida laga soo xigtay warbaahinta takhasuska u leh, warshada sameysay saacada reer Switzerland ee caanka ah ayaa soo saartay oo keliya 50 saacadood oo model-kan ah, taasi oo Nadal xirto dhammaan kulamada ciyaarihiisa.
Saacada ayaa ah khafiif oo kama badna miisaankeeda 19 gram, markii ay soo baxday 2013 qiimaheedu wuxuu ahaa 750 kun oo euro, laakin hadda sicirkeeda ayaa kor u kacay oo gaartay ku dhowaad 1.5 milyan euro goobaha lagu iibiyo noocyada saacadahan oo kale.
Guardiola ayaa caan ku ah jaceylka uu u qabo inuu xirto saacadaha qaaliga ah, waxa uuna marar badan ka soo muuqday isaga oo xiran saacado qaali ah oo noocyo kala duwan leh.